Swedish Study Showing Post SRS igbu onwe | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Swedish Study Showing Post SRS igbu onwe
Ogologo Ntughari Maka Mmegharị Mmekọahụ Na-aga Surwa Ahụ Mmekọ Mmekọ Mmekọahụ: Cohort Study inSweden
Cecilia Dhejne1, Paul Lichtenstein2, Marcus Boman2, Anna LV Johansson2, Niklas La ̊ngstro ̈m2,3, MikaelLande ́n1,2,4 * 1Obi nke Clinical Neuroscience, Nkebi nke Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 2Teology Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 3Centre maka Mgbochi Mpụ Ime Ihe Ike, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, 4Azụ nke Neuroscience na Physiology, TheSahlgrenska Academy na Mahadum Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Ihe: Ọgwụgwọ maka transsexualism bụ ịlaghachi nke nwoke na nwanyị, gụnyere ọgwụgwọ homonụ na ịwa ahụ iji mee ka ahụ mmadụ bụrụ onye na-abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ibe ya. Onwechaghi ogologo oge, ihe omumu diri ya na nmeko nwoke.
ebumnobi: Iji tụọ ọnwụ, ọrịa, na ọnụ ọgụgụ ndị omekome mgbe ịgagharịrị mmekọahụ transass nwoke na nwanyị.
Design: Ọmụmụ na-agụkọ agụmakwụkwọ nke ndị mmadụ.
Ịtọ: Sweden, 1973-2003.
Ndị so na: 324mụ nwoke niile nwoke 191 nyefere ikike nwoke (133 nwoke na nwanyị, 1973 ndị nwoke na nwanyị) na Sweden, 2003–10. Njikwa Randompopulation (1: XNUMX) bụ afọ ọmụmụ na ịmụ nwa nwoke ma ọ bụ nwoke na nwanyị ekenyela ọzọ
Ihe Nchọpụta Isi: Ihe mgbaru ọsọ Hazard (HR) nwere oge ntụkwasị obi 95% (CI) maka ọnwụ na ọrịa uche nwere ụdị Cox regression, bụ nke edoziri maka ọnọdụ mbata na ọpụpụ na ọrịa psychiatric tupu inwe mmekọahụ (mmezi HR [aHR]).
Results: Onu ogugu ndi mmadu banyere inwe nmekorita di elu karia oge a (aHR 2.8; 95% CI 1.8–4.3) karia njide nke otu nmekorita nwoke na nwoke, karia onwu site na igbu onwe (aHR 19.1; 95% CI 5.8–62.9). Ndi nwoke nwere mmekorita nwoke na nwanyi nwekwara nsogbu karie maka igbu onwe ha (aHR 4.9; 95% CI 2.9–8.5) na nlekọta nnabata nke uche (aHR 2.8; 95% CI 2.0-3.9) .Ndi parisons nwere njikwa ya dabere na mmekorita nwoke na nwanyi na enwetara. -Mụ nwoke, ma ọ bụghị ụmụ nwoke, nwere ihe egwu kachasị elu maka ikpe mpụ karịa njikwa mmekọahụ ha na-enwe.
Mkpebi: Ndị nwere transsexualism, mgbe ekenyela mmekọrịta nwoke na nwanyị, nwere nnukwu ihe egwu dị oke elu maka ọnwụ, akparamagwa igbu onwe, na ọrịa isi mgbaka karịa ọnụ ọgụgụ mmadụ niile. Nchoputa anyi n’egosi na ighaghari nwoke na nwanyi, n’agbanyeghi ibelata onodu nwoke na nwanyi, nwere ike ha ezughi oke dika ọgwụgwọ transsexualism, kwesiri ikwalite mmuta ihe di iche-iche na mmachi anya mgbe ndi nwoke gharitechara.
Ntughari: Dhejne C, Lichtenstein P, Boman M, Johansson ALV, La ̊ngstro ̈m N, et al. (2011) Followgbasochi Ogologo Oge Transsexual Eniyan N'agwa
Gerywa Ahụ Mmekọahụ: Ọmụmụ ihe na Sweden. PLoS ANYA 6 (2): e16885. doi: 10.1371 / journal.pone.0016885Ezizi: James Scott, Mahadum nke Queensland, AustraliaReceivedSeptember 30, 2010; AnakwereJanuary 9, 2011; BipụtaraFebril 22, 2011Copyright: ß2011 Dhejne et al.
Nke a bụ edemede emeghe nke ekesara n'okpuru usoro nke ikike ikikere Creative Commons, nke na-enye ohere iji ya kesaa, kesasịa na nbịpụta na usoro ọ bụla, ebe enyere onye edemede na isi mmalite ya ihe.
Ego: Enyere nkwado ego site na nkwekọrịta mpaghara na ọzụzụ ahụike na nyocha ụlọ ọgwụ (ALF) n'etiti Stockholm County Councillor Karolinska Institutet, yana site na onyinye si na Swedish Medical Research Council (K2008-62x-14647-06-3) na Royal Swedish Academy nke Sciences (Torsten Amundson's Foundation). Ndị nkwado nke ihe ọmụmụ ahụ enweghị ọrụ na nhazi ọmụmụ, mkpokọta data, nyocha data, ịkọwa data, ma ọ bụ idepụta ederede. Ndị edemede niile nwere ohere zuru oke na data ahụ n'ọmụmụ ihe ahụ na ọrụ ikpeazụ maka mkpebi inyefe maka mbipụta bụ nke ndị kwekọrọ na-ekwenye ekwenye. Mmegharị ahụ kwupụtara na enweghị mmasị asọmpi ọ bụla.
Transsexualism (ICD-10),  ma ọ bụ nsogbu njirimara nwoke na nwanyị (DSM-IV),  bụ ọnọdụ nke njirimara nwoke na nwanyị - echiche nke ịbụ nwoke ma ọ bụ nwanyị - na-emegide ọdịmma anụ ahụ ya. . Onye ahu nwere ahuhu dysphoria nke nwoke na nwanyi ibi ndu ma nabata ya dika onye ozo.
Ọgwụgwọ maka transsexualism gụnyere iwepụ ntutu isi, ọzụzụ olu, yana ọgwụgwọ nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ na-eme ka ahụ onye ahụ nwee mmekọ na nwoke na nwanyị dị ka o kwere mee iji belata dysphoria okike. Mmeghari mmekorita nke nwoke na nwanyi gunyere wepu oria nke aru iji mee ka mmekorita nke nwoke na nwanyi dika nke nwoke na nwanyi, nke anakpo nmeghari nwoke na nwanyi (SRS). Nke a bụ ihe pụrụ iche ọ bụghị naanị na isi mgbaka mana na ọgwụ niile. Beendị mgbanwe nwoke na nwanyị ugbu a emeela ihe karịrị ọkara narị afọ ma ọ bụ ọgwụgwọ a nabatara na mba ụwa iji mee ka dysphoria nke nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ. , 
N'agbanyeghị ogologo oge nke ọgwụgwọ a, Otú ọ dị, data nchịkọta banyere ọnwụ na ọrịa uche uche dị ntakịrị. Banyere igbu onwe na ọnwụ site na ihe ndị ọzọ mgbe emegharịrị mmekọahụ, ọmụmụ ihe ọmụmụ Sweden n'oge soro mmadụ 24 transsexual maka nkezi nke afọ isii wee kọọ otu igbu onwe ya.  Otu nchọpụta Swedish mere na-edepụta mmadụ atọ gburu onwe ha mgbe a gbasara ịwagharị mmekọahụ nke ndị ọrịa 175.  Otu nnyocha banyere ịgbaso na Swedish n'oge na-adịbeghị anya ekwughị na ọ bụ ndị gburu onwe ha na ndị ọrịa transsexual 60, mana otu ọnwụ n'ihi nsogbu mgbe a gbasara ịwa ahụ mmekọahụ.  Otu nnyocha e mere na Denmak kwuru na mmadụ igbu onwe ya n'ime mmadụ atọ n'ime mmadụ iri abụọ na itoolu ndị nwoke na nwanyị transsexual so na ya gbasoro ihe dị ka afọ isii.  N'aka nke ọzọ, ọmụmụ ihe ndị Belgium mere banyere mmadụ 29 transsexual sochiri afọ 8-107 achọtaghị igbu onwe ma ọ bụ ọnwụ site na ihe ndị ọzọ.  Nnukwu ọmụmụ ihe ọmụmụ otu Dutch (N = 6), na-elekwasị anya na ihe ọjọọ na-esote ọgwụgwọ hormonal, jiri tụnyere nsonaazụ mgbe ọgwụgwọ hormone na-enwe mmekọrịta nwoke na nwanyị na Dutch na-eme ka ọnụọgụ ọnụọgụ na ọnụọgụ adịghị ma ọ nweghị ọnwu na-abawanye, ma e wezụga ọnwụ igbu onwe onye na ọrịa AIDS n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị 9-1,109 afọ.  Otu nnyocha ahụ kwubiri na nkwupụta na nso nso a na ọgwụgwọ nke homonụ na-enwe mmekọrịta nwoke na nwanyị yiri ka ọ bụ nke a na-anabata nke ọma, mana iji chekwaa ya na nyocha ụlọ ọgwụ siri ike na-efu.  Ihe mmachi gbasara ndị otu Dutch bụ na agabataghị ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa mesoro homonụ nwoke na nwanyị nwere mmerụ nwoke ma ọ bụ nwanyị jikwa ịwa ahụ nwee mmekọahụ.10]
Data adabaghị n'ihe gbasara ọrịa uche nwoke na nwanyị ga - ebubata ya na mmekọrịta nwoke na nwanyị. Agbanyeghi na otutu ihe omumu edeputala ihe banyere oria uche na ezi uche di nma mgbe ha nwesachara ogwu na / ma obu aru ogwu, , , , , ,  ndị ọzọ akọwo na egrets,  ọrịa uche, na igbu onwe onye site na SRS. , [18Nyocha usoro nyocha na usoro nyocha n'oge na-adịbeghị anya kwubiri na ihe dị ka 80% kwuru banyere mmụba banyere ụdị nwoke na nwanyị dysphoria, ịdị mma nke ndụ, na mgbaàmà nke uche, mana na-enwe ọmụmụ na-akọ banyere oke ọrịa uche na ọnụego igbu onwe ya.19] Ndị dere ndị ahụ kwubiri na ihe ndị na-egosi na nwoke ga na-ekenye ndị ọzọ mmekọ nwoke na nwoke “adịghị mma n'ihi oke usoro ọmụmụ nke ihe ọmụmụ gụnyere.”
Nchikota usoro ihea nwere otutu ihe. Nke mbu, odidi banyere mmekorita nwoke na nwanyi n’eme ka ihe omumu abuo kpuchie nke nsonaazụ ya. Nke abuo, transsexualism bu obere  ọtụtụ ndị na-esochi ya na-egbochi ọtụtụ ọnụọgụ ọmụmụ. , , , , , , , , ,  Nke atọ, ọtụtụ ndị ekenyela mmekọ nwoke na nwoke na-ajụ isonye n'ọmụmụ ihe ndị ọzọ, ma ọ bụ ịkwaga mgbe a wasịrị ya ahụ, nke a na-ebute ọnụego mpịakọta na nkwụsi ike n'ihi ya.12], , , , , [30Nke ọzọ, ọtụtụ ọmụmụ ihe na-esochi oge mmụkọ oge , , , , ,  Jikọrọ ọnụ, mkpebi ndị a na-egbochi nkwubi okwu siri ike. Ọmụmụ a na-achịkwa maka ogologo oge bụ otu ụzọ iji dozie adịghị ike ndị a.
N'ebe a, anyị tụlere ịnwụ anwụ, ọrịa isi mgbaka, yana mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta mmadụ na nwanyị gosipụtara na mmebi iwu mgbe emezigharị mmekọahụ na ụmụ nwoke na nwoke na nwanyị, na ngụkọta ọnụ ọgụgụ ndị otu ọnụ ọgụgụ na-agbaso ozi ogologo oge enwetara site na ndekọ Sweden. Ejiri ngalaba ahụ tụnyere njikwa ndị ahọpụtara na enweghị usoro jikọtara afọ na okike. Anyị gbanwere maka ọdịiche dị iche iche gbasara ọrịa uche na ọnọdụ ndị kwagara mba ọzọ. Ihe omumu ihe omumu a na-enye ohuru ohuru banyere aru ike ndi mmadu na ndi nwoke na nwanyi. Otú ọ dị, ọ naghị ekwu ma nchigharị mmekọahụ ọ bụ ọgwụgwọ dị irè ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ndebanye aha mba
Achọpụtara ọnụ ọgụgụ ọmụmụ ihe site na njikọ nke ọtụtụ ndebanye aha mba Sweden, nke nwere ngụkọta nke ndị mmadụ pụrụ iche nde 13.8. Lọ Ọgwụ Ọpụpụ HDlọ Ọgwụ (HDR, nke National Board of Health and Welfare nwere) nwere nchọpụta nhapu, ihe ruru mmadụ asaa na-enye onyinye, ihe ndị na-akpata ọrịa ma ọ bụ ọnwụ, usoro usoro ịwa ahụ, na ụbọchị ịhapụ. A na-enyocha nyocha ndị a na-eme ka ọ pụta dị ka 8 (1969-1986), 9 (1987-1996), na nke iri (10-) nke International Classification of Diseases (ICD). Ndebanye aha ahụ metụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ọgwụgwọ ọrịa uche niile na Sweden kemgbe 1997. A na-etinye njupụta ndị mere na 1973 Disemba 31 Enweghị ike iji koodu usoro ịwa ahụ maka ọmụmụ ihe a n'ihi enweghị koodu a kapịrị ọnụ maka ịghagharị mmekọahụ. Onu ogugu ndi mmadu (TPR, nke Statistics Sweden) nwere bu ihe omuma banyere ndi Sweden nile. Site na njikọ na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ niile enwere ike ịmata ụbọchị ọmụmụ na okike ọmụmụ maka isiokwu ọmụmụ niile. A na-emelite ndekọ ahụ kwa afọ na ozi gbasara nwoke na nwanyị dị ruo 2003/2004. E guzobere Medical Register (MBR) na 2005 ma nwee data ọmụmụ, gụnyere okike nke nwa ahụ mgbe a mụrụ ya. Nchịkọta ọnụ nke mba dabere na akwụkwọ nyocha onwe onye chọrọ nke ụmụ amaala niile toro na 1973, 1960, 1970, na 1980 nyere ozi gbasara ndị mmadụ n'otu n'otu, ezinụlọ, na ebe obibi, gụnyere okike, ebe obibi, na ọkwa agụmakwụkwọ kachasị elu. Enweta data mbugharị, gụnyere obodo amụrụ maka ndị mbata maka 1990-1969, sitere na TPR. Na mgbakwunye na ozi mmụta sitere na ọnụ ọgụgụ ahụ, anyị nwetakwara data ọkwa agụmakwụkwọ kachasị elu maka afọ 2003 na 1990 site na Register nke
Agụmakwụkwọ. Ihe na - edenye aha ọnwụ (CDR, Statistics Sweden) na - edekọ ọnwụ niile na Sweden kemgbe 1952 ma nyekwa ya
ozi banyere ụbọchị ọnwụ na ihe kpatara ọnwụ. Ihe omume ọnwụ na-eme ruo 31 Disemba 2003 gụnyere na ọmụmụ ihe a. Ndebanye aha mpụ (nke National Council of Mpụ Mpụ nyere ya) nyere ozi gbasara ụdị mpụ na ụbọchị niile gbasara ndị omekome na Sweden na oge 1973-2004. Agbakwunyere ụdị nke mmebi iwu niile sokwa. A na-edeba aha mpụ niile dị na Sweden n'agbanyeghị oke ara na oge arụrụala; dịka ọmụmaatụ, maka ndị mmadụ tara ahụhụ site na psychosis n'oge mmejọ ahụ. Ọzọkwa, data amamịghe gụnyere ndị natara ahịrịokwu ma ọ bụ ndị anaghị edobe ha yana ikpe ebe onye ọka iwu kpebiri ịdọ aka na ntị ma ọ bụ daa ntaramahụhụ n'enweghị ụlọ ikpe. Na mmechi, Sweden adịghị iche na ndị otu ndị European Union maka ọnụego mpụ ime ihe ike na mkpebi ha.31]
Onu ogugu, nyocha nke ndi ekenyero mmadu nwoke ma obu nwanyi.
Emere ihe omumu a dika onu ogugu ndi mmadu. Anyị jiri nọmba ndebanye aha mmadụ nke ọ bụla, ekenye ndị niile bi na Sweden, gụnyere ndị kwabatara mbata, dị ka isi ihe dị na njikọ niile. Nọmba ndebanye aha ha bụ ọnụọgụ iri; isii izizi na-enye ozi gbasara ụbọchị ọmụmụ, mana ọnụọgụ itoolu na-egosi okike. Na Sweden, a na-eziga mmadụ nke na-eweta ọrịa dysphoria na otu n'ime ndị otu nwoke isii chọrọ ọkachamara nke na-atụle ma na-agwọ ndị ọrịa n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ nkwenye mba ụwa: Standkpụrụ Nlekọta.  Site na asambodo asusu, onye ahu tinye na National Board of Health and Welfare ka o nweta ikike maka ogwugwo mmekọahụ na nmeghari ọnọdụ nwoke na nwanyi iwu kwadoro. Nọmba ndebanye aha ọhụrụ nke na-egosi ụdị okike ahọpụtara ka edechara nwoke ma ọ bụ nwanyị ibinye ya akwụkwọ ahụ. National Board of Health na Welfare na-ejigide njikọ dị n'etiti nọmba ndebanye aha ọhụrụ na nke ọhụrụ, na-eme ka o kwe omume ịgbaso ndị na-aga ịlụ nwoke na nwanyị gafere n'ofe ndekọ na oge na-aga. Yabụ, ịwa ahụ gbasara mmekọahụ na Sweden chọrọ (i) nchọpụta transsexualism yana (ii) ikike sitere na Kọmitii Ahụike na Ọchịchị.
A kọwapụtara mmadụ dị ka ekpughere mmetọ nwoke na nwanyị nwere mmekọ nwoke na nwanyị ma ọ bụrụ na emezuru ihe abụọ: (i) opekata mpe nchọpụta ọrịa nchoputa nwoke na nwanyị na-enweghị nyocha ụkwara ume na ndekọ Dislọ Ọgwụ, na (ii) opekata mpe otu ihe dị iche na nke nwoke na nwanyị iche N’asụsụ Ọmụmụ Ahụike Ahụike (site na 1973 gaa n’ihu) ma ọ bụ National Censuses site na 1960, 1970, 1980, ma ọ bụ 1990 na nha ọhụụ gbasara aha nwoke na nwanyị. E were ọrụ izizi maka ijide ụlọ ọgwụ maka ịwa ahụ mmekọahụ nke na-arụ ọrụ iji chekwaa nchọpụta ahụ ma wepụta oge maka ịwafere mmekọahụ; ndị dọkịta na-awa plastik ahụ na-edekọ ihe kpatara ịwa ahụ nwoke na nwanyị ịgha, ntụgharị, transsexualism, mana ọ bụghị ọrịa psychiatric na-emekọ ihe ọ bụla. Ejiri ọkwa nke abụọ iji hụ na mmadụ ahụ gafere nzọụkwụ niile na njikọta mmekọahụ ma gbanwee mmekọahụ n'ụzọ iwu.
A kọwara ụbọchị ịtụgharị maka inwe mmekọ nwoke na nwanyị (mmalite nke na-esochi) dị ka ihe mbụ mere na nchọpụta njiri mara nwoke na nwanyị, na-enweghị nsogbu ọghọm ọ bụla ọzọ, na Dislọ Ọpụpụ Dislọ Ọgwụ mgbe onye ọrịa gbanwere ọnọdụ mmekọahụ (esemokwu ọ bụla na ịkọwa nwoke na nwanyị gafee na Censuses, Ahụike Ahụike, na Ọnụ Ọgụgụ Ọha na Edemede). Ọ bụrụ na ozi a adịkwaghị, anyị na-eji oge kachasị nso na Dislọ Ọpụpụ whichlọ Ọgwụ nke nyochawara onye ọrịa na nsogbu njiri mara nwoke na nwanyị na-enweghị nsogbu mgbaka uche tupu mgbanwe na ọnọdụ mmekọahụ. Ihe mere eji ebute ihe nchoputa okike nchoputa okike anya mgbe gbanwere ọnọdụ nwoke na nwanyị n’elu tupu bụ zere ile mmadụ anya dị ka onye nwere mmekọahụ ma ọ bụrụ na onye ahụ ekenyela ya.
N'iji usoro ndị a, ngụkọta ndị ọrịa 804 nwere nsogbu nsogbu nwoke na nwanyị ka achọpụtara, ebe 324 gosipụtara ngbanwe na ụdị okike n'oge 1973-2003. Ndi 480 na agbanweghi agbanwe agbanwe na nwoke na nwanyị nwere ndị na-etinyeghị akwụkwọ ma ọ bụ akwadoghị maka ịwa ahụ nwoke na nwanyị. Ọzọkwa, koodu ICD 9 302 abụghị koodu akọwapụtara maka nsogbu mmekọahụ. N'ihi ya, otu a nwekwara ike mejupụtara ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ maka nsogbu mmekọahụ na-abụghị transsexualism. Ya mere, ewepu ha na nyocha ndi ozo. N'ime mmadụ 324 ndị ọzọ, mmadụ 288 bụ ndị akọwapụtara na nyochapụta njirimara nwoke na nwanyị mgbe na 36 tupu mgbanwe okike nwoke. N'ime mmadụ 288 a kọwara mgbe ọnọdụ mmekọahụ, gbanwere 185 tupu mgbanwe na ọnọdụ nwoke na nwanyị. Oge etiti n'etiti etiti ụlọ ọgwụ tupu na mgbe mgbanwe mmekọahụ maka mmadụ 185 ndị ​​a bụ afọ 0.96 (pụtara afọ 2.2, SD 3.3).
Edebere nsogbu gbasara nwoke na nwanyị dịka ICD-8: 302.3 (transsexualism) na 302.9 (ntụgharị mmekọahụ NOS); ICD-9: 302 (koodu izugbe maka ihe ndị nwere mmekọahụ na nsogbu, enweghị koodu ndị akọwapụtara karịa na ICD-9); na ICD-10: F64.0 (transsexualism), F64.1 (abụọ na-ekere òkè transvestism), F64.8 (nsogbu njirimara nwoke na nwanyị), na F64.9 (nsogbu njirimara nwoke na nwanyị NOS). Ederede ọrịa ụbụrụ ndị ọzọ dịka ICD-8: 290-301 na 303-315; ICD-9: 290-301 na 303-319; yana ICD-10: F00-F63 yana F65-F99.
Amata njikwa ndị dabeere na onu ogugu (otu na-akọghị)
Maka onye ọ bụla ekpughere (N = 324), anyị na-ahọrọ njikwa 10 na-akọwaghị. A kọwara mmadụ dị ka onye ekpugheghị ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na enwegaghị ihe ọ bụla na nkọwapụta nwoke na nwanyị n'ofe Censuses, ọmụmụ Ahụike, na ihe ndekọ mmadụ na Onweghi nsogbu nchọpụta njiri mara nwoke na nwanyị dịka ndekọ ndekọ Dislọ Ọgwụ dị. Ndị na-achịkwa mmekorita nwoke na nwanyị nwere mmekọahụ na afọ ọmụmụ, ọ ga-adị ndụ ma bie na Sweden na ọnụego nnọkọ nwoke na nwanyị gbasara ikpe ahụ. Iji mụọ nsonaazụ mmekọ nwoke na nwanyị nwere ike na nsonaazụ mmasị, anyị ji otu njikwa abụọ dị iche iche: otu na otu nwoke na nwanyị ahụ dịka ikpe gbasara ọmụmụ nwa (nke nwoke na nwanyị mụrụ nwa) nke ọzọ na mmekọahụ nke ekenyela onye nke ọzọ ( mmekorita nwoke na nwanyị ikpeazụ.
Anyị mụrụ gbasara ọnwụ, ọrịa uche, ihe ọghọm, na mpụ soghachịrị mmekọrịta nwoke na nwanyị. Karịrị, anyị nyochara: (1) ọnwụ na-akpata ọnwụ, (2) ọnwụ site na igbu onwe / ejighị n'aka, (3) ọnwụ nke ọrịa obi, na (4) ọnwụ site na etuto ahụ. Ihe ojoo gụnyere (5) nsogbu ọ bụla nke isi mgbaka (anaghị atụpụrụ nkwupụta nwoke na nwanyị), (6) ị alcoholụbiga mmanya ókè / ị drugụ ọgwụ ọjọọ na ịdabere na ya, (7) ịnwale / ịnwa igbu onwe onye edoghị anya, yana (8) ihe ọghọm. N'ikpeazụ, anyị gwara mkpebi ụlọ ikpe maka (9) ịda iwu ọ bụla na (10) mpụ ime ihe ike ọ bụla. Onye ọ bụla nwere ike inye aka na ọtụtụ nsonaazụ, mana naanị otu ihe na - esi na ya pụta. A kọwara ihe kpatara ọnwụ (Ihe kpatara Ọnwụ Ọnwụ site na 1952 wee gaa n'ihu) dabere na ICD dịka igbu onwe (Koodu ICD-8 na ICD-9 E950-E959 na E980-E989, ICD-10 Koodu X60-X84 na Y10-Y34); ọrịa obi (koodu ICD-8 390-458, koodu ICD-9 390-459, koodu ICD-10 I00-I99); neoplasms (ICD-8 na ICD-9 Koodu 140-239, ICD-10 Koodu C00-D48), nsogbu ọgba aghara ọ bụla (anaghị egbochi njirimara nwoke na nwanyị); (Koodu ICD-8 290-301 na 303-315, ICD-9 Koodu 290-301 na 303-319, ICD-10 Koodu F00-F63 na F65-F99); ihe ọ alcoholụ alcoholụ na-egbu egbu / ị drugụ ọgwụ ọjọọ na ịdabere (Koodu ICD-8 303-304, ICD-9 Koodu 303-305 (anaghị atụpụ ụtaba), koodu ICD-10 F10-F16 na F18-F19 (x5 ewepụrụ); yana ihe ọghọm (ICD- 8 na koodu ICD-9 E800-E929, koodu ICD-10 V01-X59).
A na-agụta ikpe ọ bụla na-eme mpụ n'oge mmechi; akọwapụtara, mpụ ime ihe ike kọwara dị ka ogbugbu mmadụ na ịnwa igbu mmadụ, ajọ mwakpo na mwakpo, izu ohi, omume iyi egwu, mmanye egwu, ogbugbu mmadụ, ma ọ bụ mmebi iwu ọ bụla.32]
Akọwaala ọrịa isi mmụọ dịka nlekọta inpatient dịka usoro ICD-8 siri dị 291, 295-301, 303-304, na 307; Koodu ICD-9 291-292, 295-298, 300-301, 303-305 (anaghịzi a tobaccoụ sịga), 307.1, 307.5, 308-309, na 311; Koodu ICD-10 F10-F16, F18-F25, F28-F45, F48, F50, na F60-F62. Ọnọdụ kwagara, nke akọwapụtara dị ka ndị amụrụ na mba ọzọ, sitere na Ọgụgụ Onu ogugu. Emechara mgbanwe / mgbanwe niile pụta (ntụgharị, emetụtara ma ọ bụ emetụtaghị) na enweghị ụkpụrụ efu.
Nnyocha nchịkọta akụkọ
Onye ọ bụla nyere mmadụ oge site na ntinye akwụkwọ (maka ekpughere: ụbọchị nke ịtụgharị maka mmekọahụ; maka onye a na-ekpughere ya: ụbọchị nke ịtụgharị nwoke na nwanyị nke mmekọrịrị) ruo ụbọchị ihe omume, ọnwụ, mpụga, ma ọ bụ njedebe oge ọmụmụ (31 Disemba 2003), nke mbu buru ụzọ bia. Ejiri mmekọrịta dị n'etiti ikpughe (ịtụgharị nwoke na nwanyị) na nsonaazụ (ọnwụ, ọrịa, mpụ) site na oke ihe ọghọm (HR) na 95% CI, na-eburu oge sochirinụ. A na-enyocha HRs site n'ụdị mmezi nsogbu mgbanwe Cox, nke agbadoro na ihe ndị emetụtara (1∶10) maka njikota nwoke na nwanyị, afọ, na kalenda (afọ ọmụmụ). Anyị na-ewetara HRs dị nhịahụ (ọbụlagodi idozi ya maka mmekọahụ na afọ site na ịha nha) yana ndagide HRs [aHRs] maka nsonaazụ niile. Aghọtara ndị nnọchi anya abụọ ahụ, ọnọdụ ndị si mba ọzọ (ee / mba) na akụkọ ihe mere eme nke ọrịa psychiatric (ee / ee) tupu oge ntụgharịaka mmekọahụ, ka ahọpụtara site na nyocha gara aga ,  na mbipụta dị iche iche gafere okwu na njikwa (Isiokwu 1).
Emere nyocha nke ndi nwoke na ndi nwoke, ihe nlere nke Kaplan-Meier na-egosiputa onodu nwoke na nwoke
inyefe n'aka na igwe agha na njikwa ya (ihe kpatara ọnwụ) oge na-aga. Etubere ọkwa dị mkpa na 0.05 (ule abụọ dị na abụọ) .Mapụta nsonaazụ ọ bụla / mgbanwe ọnụọgụ abụọ enweghị ụkpụrụ na-efu, ebe ha sitere na data aha, nke dịnụ ma ọ bụ na-efu (emetụtaghị). Ejiri data ahụ site na iji SAS version 9.1 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA).
Usoro nyocha nke akwụkwọ ndekọ aha obodo chọrọ maka ọmụmụ a ka ndị IRB kwadoro na Karolinska Institutet, Stockholm. Enyocha data niile na-enweghị aha; ya mere, nkwenye nye onye obula abughi ihe nkari ma obu omume.
Anyị chọpụtara ndị transsexual 324 (ndị otu kpughere) bụ ndị a na-eme ịwa ahụ ọzọ ma kenye anyị mmekọrịta nwoke na nwanyị iwu n'etiti 1973 na 2003. Ndị a bụ ndị ekenyela nwoke na nwanyị (onye ekpughere). Pasent iri itoolu na iteghete (N = 191) nke ndị ekenyela nwoke na nwanyị bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị iri anọ na anọ (N = 41) ụmụ nwoke, na-eme oke mmekorita nwoke na nwanyị nke 133∶1.4 (Isiokwu 1).
Nkezi oge ị na-esochi ihe niile na-akpata ọnwụ dị afọ 11.4 (etiti 9.1).
Oge gboo maka ihe ize ndụ nke ime ụlọ ọgwụ maka ọrịa uche ọ bụla bụ 10.4 (median 8.1).
Ihe e ji mara tupu nwoke ịlụ nwoke ọzọ
Isiokwu 1 gosiputara agwa di iche-iche nke ndi mmadu meghari ma na-ejikwa ndi mmadu tupu ha abanye akwukwo. Ebe ahụ
enweghị ọdịiche gbara ọkpụrụkpụ dị n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị maka ihe njiri azụ. Ọnọdụ kwagara ná mba ndị ọzọ na-adịkarị n'etiti ndị na-eme transsexual ji aka na njikwa, ibi n'ime obodo mepere emepe, na-agụkarị akwụkwọ, na agụmakwụkwọ ka elu banyere nke a. Ndi oria nwoke na nwanyi na abiaala banyere oria oria di iche na -enwe oria nwoke na nwanyi tupu nwanyi inwe mmeko nwoke na nwanyi ugboro ato karia njikwa ya. Iji dozie maka ọdịiche dị na ntọala ndị a, a na-edobe oke ihe ọghọm maka ọnọdụ ọpụpụ na ọrịa psychiatric tupu mmalite a maka nsonaazụ niile [aHRs].
Tebụlụ nke abụọ kọwara nsogbu dị na nsonaazụ ndị a họọrọ ka emesịa n'etiti ndị ekenyela nwoke na nwanyị, ma e jiri ya tụnyere njikwa otu afọ nke nwoke na nwanyị. Mmegharị nwoke na nwanyị ndị a na-agagharị na nwoke ma ọ bụ nwanyị abụọ nwere ihe dị ka okpukpu atọ karịa ihe ọ bụla nwere ike ịnwụ karịa njikwa ya, mgbe ọ nwesịrị mmezi maka covariates. Tebụlụ nke abụọ edepụtara nsonaazụ ndị dabere na oge emere nwoke ma ọ bụ nwanyị na nwanyị: n'oge 2-2 ma ọ bụ 1973–1988. Agbanyeghị na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-agbago n'ogologo oge abụọ, ọ baghị uru na ndekọ ọnụ ọgụgụ oge 1989 –2003. Uzọ a Kaplan-Meier (Onyonyo 1989) na-atụ aro na nlanarị nke ndị na - emezighị emezi malitere ịgbada site na njikwa ndị ahụ emechara mgbe ihe dị ka afọ iri gachara. Ihe kpatara ọnwụ na - egbu onwe bụ ihe dị elu karịa ndị ekenyela mmekọ nwoke na nwoke, ma e jiri ha tụnyere njikwa ndị raara nye. Ọnwụ nke ọrịa obi na-agbagozi n'etiti mmekọrịta nwoke na nwanyị, ebe ọnụọgụ ọnụọgụgụ adịkarịsịrị njọ na-emetụta n'ụzọ dị njọ site na njikọ ọnụ. Ihe ojoo a bu kansa cancer (N = 2003), cancer cancer (N = 1), cancer pharyngeal (N = 10), cancer akwara (N = 3), cancer cancer imeju (N = 1), na mmalite amaghi ama (N = 1) ).
Ọgụgụ 1. Ọnwụ site na ihe ọ bụla dị ka ọrụ oge mgbe nwoke na nwanyị gaferela n'etiti mmadụ 324 transsexual na Sweden (nwoke na nwanyị: N = 191, nwoke na nwoke: N = 133), na njikwa ọnụ ọgụgụ ga - ekwekọ n'afọ ọmụmụ. .
Tebụl 2. Egwu nke nsonaazụ dị iche iche dị n’etiti ndị mmadụ na-ekenye nwoke na nwanyị na Sweden (N = 324) ma e jiri ya tụnyere njikwa ndị mmadụ kwekọrọ n’afọ ọmụmụ na mmekọahụ nwa.
Ọrịa uche, ọgwụ ọjọọ, na ihe ọghọm
Ndi mmadu ekenyela nwoke na nwanyi nwere nsogbu di elu na nlekọta ebe anaghi anabata oria na adighi akowaputa nwoke na nwanyi karia njikwa ya ndi amuru na imu nwa.Isiokwu 2). Emere nke a mgbe emesigharịrị maka ọrịa uche ndị bu ụzọ, ọ bụkwa eziokwu n'agbanyeghị agbanyeghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ọzọ tupu afọ 1989. N'ikwekọ ọnụ ọgụgụ na-arị elu nke mmadụ site na igbu onwe, ndị ekenyela mmekọrịta nwoke na nwanyị nọkwa n'ihe ize ndụ dị elu maka ịnwa igbu onwe, n'agbanyeghị na nke a abụghị. Statistically dị mkpa maka oge 1989-2003. Ihe ize ndụ nke ịbụ ụlọ ọgwụ maka iji ihe na-eri ahụ ma ọ bụ ihe ọghọm esighi ike na-arịwanye elu mgbe hazigharịrị maka ndị covariates (Isiokwu 2).
Ndi mmadu nke transsexual nwere ihe egwu di elu ka a maa ha ikpe maka mpu obula ma obu mpụ ime ihe ike mgbe obula gbasara mmeko nwoke na nwoke (Isiokwu 2); nka bu ihe putara ihe na ndi otu ndi nwoke ndi nwoke ndi nwoke tupu ha alu 1989.
Mmekorita nwoke na nwoke
Ntụnyere nke ụmụ nwoke na ụmụ nwoke, n’agbanyụọ site na ike dị nta na ọnụ ọgụgụ ntụkwasị obi na-agakọ, na-atụkarị ihe egwu dịkarịsịrị mma maka nsonazụ ọjọọ.Tebụl S1 na S2). Agbanyeghị, ime ihe ike megide mmadụ (igbu onwe ya) na ndị ọzọ ([mpụ ime mpụ) bụ nke dị iche ndị ahụ dị mkpa. Nke mbu, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwere mmụba dị ukwuu maka ịnwe igbu onwe ha ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwanyị (aHR 9.3; 95% CI 4.4-19.9) na nwoke (aHR 10.4; 95% CI 4.9-22.1). N'ụzọ dị iche, ụmụ nwoke na ụmụ nwoke amụbawo n'ụzọ dị ukwuu n'ihe banyere igbu onwe onye naanị ma e jiri ya tụnyere njikwa ụmụ nwoke (aHR 6.8; 95% CI 2.1-21.6) ma atụnyere nke njikwa ụmụ nwanyị (aHR 1.9; 95% CI 0.7-4.8). Nke a na - egosi na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nọ n'ihe ize ndụ dị elu maka ịnwa igbu onwe ha mgbe ha jikọtara nwoke na nwanyị, ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-ejidekwa onwe nke ụmụ nwanyị igbu onwe ha mgbe mgbagha mmekọahụ gasịrị.Tebụl S1 na S2).
Nke abuo, banyere mmebi iwu ọ bụla, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwere oke ihe egwu dị elu maka mpụ ma e jiri ya tụnyere njikwa ụmụ nwanyị (aHR 6.6; 95% CI 4.1-10.8) ma e jiri ya tụnyere ụmụ nwoke (aHR 0.8; 95% CI 0.5-1.2). Nke a na-egosi na ha nwere usoro nwoke maka mmebi iwu. Otu ihe ahụ mere gbasara mpụ ime ihe ike. N'ụzọ dị iche, ụmụ nwoke na ụmụ nwoke nwere oke iwu mpụ karịa njikwa nwanyị (aHR 4.1; 95% CI 2.5-6.9) mana ọdịghị iche na njikwa ụmụ nwoke. Nke a na-egosi ịgbanwu nwoke maka nwoke ime ihe nwoke na nwanyị ịlụ nwoke na nwanyị ịlụ nwoke na nwanyị na-abawanye ọnụ na mpụ. Otu ihe ahụ mere gbasara mpụ ime ihe ike.
Nchoputa isi na atụnyere ihe nyocha emere na mbu
Anyị na-akọ akụkọ gbasara izizi nke obodo niile, ndị na-esote nwoke ma ọ bụ nwanyị na-edenye aha nwoke na nwanyị. Anyị ji otu ndị otu anyị tụnyere njikwa ọnụọgụ ndị ahọpụtara na-agakọ maka afọ na okike. Ihe kachasị pụta bụ ọnụ ọgụgụ dị elu nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke, ma e jiri ya tụnyere ndị mmadụ niile. Nke a dị iche na akụkọ ndị gara aga (yana otu ihe ) nke achọtaghị ọnụ ọgụgụ mmadụ na-arịwanye elu mgbe edegharịrị mmekọrịta nwoke na nwanyị, ma ọ bụ naanị gosipụtara ihe ize ndụ ka ukwuu na mpaghara nta ụfọdụ. , , ,  Ọ gara aga ọmụmụ ihe banyere ụlọọgwụ nwere ike ịda mba ebe ndị mmadụ na-ewere ịbanye nwoke na nwanyị ịlụ nwanyị adịghị ka o si yie ka ọ ga-efu ihe na-esochi. N'otu aka ahụ, ọ bụ ihe ịma mma ịhapụ ndị nwụrụ anwụ n'ọmụmụ nyocha nke nyocha. N'ihi ya, ọmụmụ akwụkwọ ndị mmadụ bipụtara dị ka ọ dị ugbu a chọrọ iji meziwanye ikike mmadụ.19], 
Enwere ike ịkọwapụta nsogbu dara ogbenye n'ọmụmụ ihe ugbu a site na ogologo oge na-aga n'ihu (n'etiti> 10 afọ) ma e jiri ya tụnyere ọmụmụ ihe gara aga. Na nkwado nke echiche a, usoro lanarị (Figure 1) na-atụ aro ka ọnụ ọgụgụ mmadụ na-amụba site afọ iri mgbe nwoke na nwoke na nwanyị gafere ma ọ gafee. Dika odi, onu ogugu onwu di elu karie ka ndi otu n’aru n’azu 1989. Otu osi di na achoghi ịkọwa nke abuo site na nlekọta ahuike diri ndi transsexual n’oge 1990s, tinyere mgbanwe ndi mmadu banyere ndi mmadu nwere mmeko di iche.35]
Ọnwụ nke ọrịa obi na-amụba n'etiti ndị ekenyela mmekọ nwoke na nwoke, n'agbanyeghị na ekwesịrị ịkọwa nsonaazụ ndị a n'ihi ntakịrị ihe omume. Agbanyeghị, ka ọ dị, nnyocha ndị Dutch na-eme na-akọ na ọ nweghị ihe ọghọm maka ihe omume obi.10],  Otu nyocha nke meta na nso nso a mechara kwubie na data maka nsonazụ ọbara mgbe a na-eji steroid nwoke na nwanyị eme ihe dị oke mma, na enweghị mgbagha.34]
N'ihe gbasara neoplasms, ọgwụgwọ homonụ ogologo oge nwere ike ịbawanye ihe ize ndụ maka mmebi iwu,  mana nnyocha omumu gara aga anwalela ohere a. Ihe omuma anyi kwuru na ihe butere ihe nwuru onwu site na neoplasms di ihe kariri ugboro abuo (ihe putara ihe banyere onu ogugu). Igrụ arụ ndị a (lee Results), Otú ọ dị, o yikarịghị ka enwere njikọ ya na ọgwụgwọ ịwa ahụ.
Enwere ike ịkọwa nkọwa ndị ọzọ maka ịba ụba ọrịa obi na ọrịa ịba ụba. Okingụ sịga bụ na otu nnyocha nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị kwuru na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 50%. Ọ ga - ekwe omume na ndị transsexual na - ezere usoro nlekọta ahụike n'ihi ihe egwu echere na ịkpa oke.
Ọnwụ sitere na igbu onwe onye bụ nnukwu ihe n'etiti ndị ekenyela mmekọ nwoke na nwoke, ma ọ bụzigharị maka ọrịa oria mbụ. N'ikwekọ na nke a, ndị na-ekenye mmekọ nwoke na nwanyị nọ n'ihe ize ndụ ka ukwuu maka igbu onwe ha. Akụkọ gara aga , , ,  na-atụ aro na transsexualism bụ ihe egwu dị egwu maka igbu onwe ya, na mgbe ọ gbasasịrị mmekọahụ, na nchoputa anyị ogologo oge na-akwado mkpa ọ dị ịchebara ọrịa uche maka ndị nọ n'ihe ize ndụ iji gbochie nke a.
Nlekọta ndị ọrịa na-arịa ọrịa uche gbam gbam bụ n'etiti ndị enwetara nwoke na nwoke karịa ndị nwoke na ndị nwanyị
njikwa, tupu mgbe ọ bụla na mgbe alụgharị nwoke na nwanyị gasịrị. Ọ bụ ihe a nabatara na ndị transsexuals nwere nsogbu ahụike uche karịa ndị mmadụ n'ogbe ha tupu nwoke na nwanyị ibido mmekọ nwoke na nwoke.18], , ,  N'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na ọmụmụ nyocha achọpụtala oke ịda mba,  na obere ndụ ,  nakwa mgbe nwoke gbasara mmekọrịta nwoke na nwanyị. Otu o si dị, n'ọmụmụ ihe a, ihe ọghọm maka ịnabata ụlọ ọgwụ na-arịa ọrịa psychiatric ka dịgidere mgbe ọ gachara idozigharị ụlọ ọgwụ psychi tupu ibanye na mmekọahụ. Nke a na-egosi na n’agbanyeghi na inyeghachi mmekọahụ na-ebelata oke dysphoria okike, enwere mkpa ịchọpụta ma mesoo ọrịa mmekọrịta nwoke na nwanyị na transsexual ma ọ bụghị naanị tupu mgbe ọ bụla, kamakwa mgbe ọ gbasasịrị nwoke na nwanyị.
Ọrụ ndị omekome, karịsịa mpụ ime ihe ike, bụ ihe juru ebe niile n'etiti ụmụ nwoke karịa ụmụ nwanyị n'ogbe niile. Nke gara aga
nyocha nke ngwa niile maka ịbanye na mmekọahụ na Sweden ruo 1992 chọpụtara na 9.7% nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na 6.1% ndị chọrọ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-achọ ikpe maka mpụ.33] Otú ọ dị, amụbeghị mpụ mgbe ọ bụla gbasara mmekọrịta nwoke na nwanyị. N'ime ọmụmụ a, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwere ihe egwu kachasị elu maka ikpe mpụ ma e jiri ya tụnyere njikwa ụmụ nwoke. Nke a na-egosi na usoro ịlụ nwoke ma ọ bụ belata ihe egwu ọ bụla maka mmejọ nwoke na nwanyị. N'ụzọ dị iche, ụmụ nwoke na ụmụ nwoke nọ n'ihe ize ndụ dị elu maka ịma mmadụ ikpe ma e jiri ya tụnyere njikwa ụmụ nwanyị na adịghị iche na njikwa ụmụ nwoke, nke na-atụ aro ka ịba ụba nke ụmụ nwoke na ụmụ nwoke na-esoro nwoke na nwanyị lụọ.
Ike na oke ihe omumu a
Ike nke ihe omumu a gunyere onu ogugu n’uwa dum n’ime ihe kariri iri ato, oge nlekota buru ibu na mfu di obere. Ọtụtụ ihe ọmụmụ gara aga na-ata ahụhụ site na nyocha dị ala, , , ,  ebe ọmụmụ ihe a weghaara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ ndị mmekọ nwoke na nwanyị nwere ikike na Sweden site na 1973-2003. Ọzọkwa, nchọpụta ndị e mere na mbụ agwakọtala mmadụ na ndị na-emekọ ihe na ndị na-agafe agafe,22],  ebe anyị tinyere ndị transsexual nwoke na nwanyị na-arụ ọrụ na-agbanwekwa iwu. Na mmechi, ebe ọmụmụ gara aga enwebeghị otu njikwa ma ọ bụ jiri ogo ọnọdụ ịnwụ dị ka ihe atụ, , ,  anyị ahọpụtara akara njikwa ndị mmadụ na - eme n'afọ site na ọmụmụ, yana ọmụmụ ma ọ bụ mmekọahụ ikpeazụ.
N’enye ọdịdị nke mmegharị nke mmekọ nwoke na nwanyị, ọmụmụ ihe gbara asịrị abụọ na - achịkwa nsonaazụ na - esite na mgbe ebugharị mmekọahụ agaghị ekwe omume. Ya mere anyi aghaghi igbado na usoro omumu ihe omumu ndi ozo. Ebumnuche maka inyocha ma ịhazigharị mmekọahụ bụ ọgwụgwọ dị mma maka dysphoria okike, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji kọwaa ọgwụ dysphoria nwoke na nwanyị tupu edepụta ya. Emere ụdị ọmụmụ a na-elezi anya ,  ma ọ bụ na-alọghachi azụ, , , , , , , ,  ma na-atụ aro na ibunyeghachi transsexual nwoke na nwanyị na-eme ka mma ndụ na dysphoria okike. Mmachi ahụ bụ ezie na ekenyeghị ọgwụgwọ ahụ na enweghị usoro ma ọ bụrụ na e meghị ya na nzuzo.
Maka ebumnuche banyere nchekwa nke nnabata nwoke na nwanyị, ọ dị mma iji ndị mmadụ enwetara nwoke na nwanyị na njikwa mmekọrịta nwoke na nwanyị. Atzọ e si kee ya bụ na ndị na-eme mgbanwe tupu nwoke na nwanyị inwe mmekọahụ nwere ike ịdị iche na njikwa dị mma (ọ bụ ezie na enwere ike idozigharị akụkọ a site na idozi ọdịiche dị na isi). Ya mere odi nkpa iburu n'uche na ihe omumu ihe omuma a bu ihe omuma banyere ndi transsexsials health health after reassign sex; enweghị ike ị nweta ihe ndị dị mma maka itinye reassign mmekọahụ dịka ọgwụgwọ maka transsexualism. N’aka ozo, ekwesighi ịkọwa nsonaazụ ya dịka nnọgharị mmekọahụ kwa se na-abawanye ọrịa na ọnwụ. Ihe nwere ike ịka njọ na-enweghị mmegharị mmekọrịta nwoke na nwanyị. Dị ka ntụnyere, nchọpụta ndị yiri ya achọpụtawo ọrịa nwatakịrị, ọnụ ọgụgụ ndị na-egbu onwe ha, na ọnụ ọgụgụ ndị ọrịa na-arịa ọrịa isi ọwụwa.39],  Ihe a bu ihe omuma di nkpa, ma o soghi na nsogbu idozi onodu ma obu mmuta ogwu.
Akụkụ ndị ọzọ a ga-atụle bụ nke mbụ na ọmụmụ ihe a gosipụtara nsonaazụ psychiatric na ọgwụgwọ somara maka transsexualism nyere na Sweden n'afọ ndị 1970 na 1980s. Kemgbe ahụ, ọgwụgwọ ebidola n'ịwa arụgharị nwoke na nwanyị dị mma, ọgwụgwọ homonụ a nụchara anụcha, ,  na itinyekwu uche na nlekọta mmekọrịta na-akpachapụrụ anya nke nwere ike dozie nsonaazụ ya. Nke abụọ, transsexualism bụ ọnọdụ dị ụkọ na Sweden bụ obere mba (nde mmadụ 9.2 na 2008). N'ihi ya, agbanyeghị na-esite na otu mkpokọ ọnụ ọgụgụ mba na nke ga - esote ogologo oge, ikike ọgụgụ isi pere mpe. Nke ato, gbasara oria uche nke ndi dibia mgbe ebenyechara ya na ezumike, anyi enyochala nnabata banyere oria. Ebe ọ bụ na a na-enye ọtụtụ nlekọta mmụọ ọrịa na ntọala outpatient (nke enweghị data a pụrụ ịdabere na ya), elelị nke zuru a gaghị enwe nsogbu. Agbanyeghị, onweghị ihe ga-ekwere na nke a ga - agbanwe n'ihe ize ndụ ụfọdụ maka ọrịa isi mgbaka ọ gwụla ma ndị mmadụ na-enyefe transsexual mmekọrịta nwoke na nwanyị nwere ike karịa njikwa ndị ọzọ etinyere ga-abata n'ụlọ ọgwụ maka ọnọdụ ọrịa psyche ọ bụla.
Na ngwụcha, iji tọọ mmalite nke nlegharị anya, anyị butere ụzọ site na iji akara nchoputa nsogbu nwoke na nwanyị mgbe gbanwere ọnọdụ nwoke na nwanyị n’elu tupu gbanwere ọnọdụ nwoke na nwanyị, iji zere iwe mmadụ afọ ndụ ihe ize ndụ mgbe ọ bụla e kesịrị nwoke na nwanyị. Nke a pụtara na ọ ga-abụ na-elezighi anya ọghọm a rụpụtara ya. Agbanyeghị, enyere na etiti oge ịnọ n'etiti ụlọ ọgwụ tupu na mgbe mgbanwe ọnọdụ nwoke na nwanyị erughi otu afọ (lee ụzọ), ihe akachaghị agbatị a nwere mmetụta ọ rụpụtara nke ọma. Ọzọkwa, a ga-edekọ ọnwụ niile n’agbanyeghi ihe omumu a na onwu ya mere dika atulero n’echiche.
Ọmụmụ ihe a chọpụtara ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ọnwụ mmadụ, ọnwụ sitere na ọrịa obi na igbu onwe, ọnwụ nke igbu onwe, na ụlọ ọgwụ na-arịa ọrịa mmekọrịta nwoke na nwanyị na-edenye n'ụzọ mmekọahụ ma e jiri ya tụnyere ọnụ ọgụgụ nchịkwa ahụ ike. Nke a na-akọwapụta na transsexuals nke post ahụ bụ otu ihe egwu dị mkpa nke chọrọ ụbụrụ ogologo oge na oge na-esochi anya. Ọ bụ ezie na ịwa ahụ na ọgwụgwọ ịba ọcha n'anya na-ebelata oke ekike nwoke na nwanyị, o doro anya na o zughi iji dozie ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọrịa na ọnwụ dị n'etiti ndị na-eme transsexual. Ya mere, ekwesiri ilebara otu transse nwoke na nwoke ma ọ bụ nwanyị ịlụ nwanyị ọzọ ga-atụle ya mma.
Egwu nke nsonaazụ dị iche iche na ndị mmadụ na-ekenye nwoke na Sweden ma e jiri ya tụnyere njikwa ọnụ ọgụgụ matara maka afọ ọmụmụ ọmụmụ nwoke .
Egwu nke nsonaazụ dị iche iche na ndị nwoke na enwetara nwoke na nwanyị na Sweden ma e jiri ya tụnyere njikwa ekwekọrịrị maka ọmụmụ nwa nwoke na nwanyị ikpe-azu
Onye nyere onyinye
Anakwere ma hazie nyocha ndị ahụ: CD PL AJ NL ML. Nnwale ndị ahụ rụrụ: MB AJ. Nyochaa data: CD PL MB AJ NL ML. Arụrụ ọrụ reagents / ihe nyocha / ngwaọrụ nyocha: PL NL AJ. Dere akwụkwọ ahụ: CD PL MB AJ NL ML.
1.) Ahụike Worldwa (1993) Nhazi ọkwa ICD-10 nke ọrịa uche na omume. Usoro nyocha maka nyocha. Geneva: WHO.
2.) American Psychiatric Association, onye nchịkọta akụkọ. (1994) Nyocha na Statistical Manual of Disorder Disorder. Washington, DC: APA.
3. Meyer W, Bockting W, Cohen-Kettenis P, Coleman E, DiCeglie D, et al. (2002) Harrykpụrụ Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association nke Standkpụrụ Nlekọta Maka Nsogbu Ọdịmma Nwoke, Sixdị Nke isii. Akwụkwọ nke Psychology & Mmekọahụ nke mmadụ 13: 1-30.
4.) Cohen-Kettenis PT, Gooren LJG (1999) Transsexualism: Nyocha nke etiology, nyocha na ọgwụgwọ. J Psychosom Res 46: 315-333.
5.) Wålinder J, Thuwe I (1975) Nnyocha ọmụmụ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndị transsexuals iri abụọ na anọ edebere gbasara mmekọrịta nwoke na nwanyị. Göteborg, Sweden: Akwụkwọ Scandinavian.
6.) Eldh J, Berg A, Gustafsson M (1997) Ogologo oge na-agbaso mgbe ịghagharị ahụ gbasara mmekọahụ. Scand J Plast Reconstr Surg Aka Surg 31: 39-45.
7.) Johansson A, Sundbom E, Höjerback T, Bodlund O (2010) Nnyocha afọ ise nke ndị okenye Sweden nwere nsogbu njirimara nwoke na nwanyị. Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ 39: 1429-1437.
8.) Sørensen T, Hertoft P (1982) Nwoke na nwanyi transsexualism: ahụmịhe Denmark na ndị ọrịa 37. ArchSex Behav 11: 133-155.
9.) De Cuypere G, T'Sjoen G, Beerten R, Selvaggi G, De Sutter P, et al. (2005) Mmekọahụ na ahụ ike mgbe a gbasara ịwa ahụ ọzọ. Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ 34: 679-690.
10.) van Kesteren PJ, Asscheman H, Megens JA, Gooren LJ (1997) Ọnwụ na nhụjuanya na isiokwu transsexual mesoro ya na mmekorita nwoke na nwanyị. Ọgwụ Endocrinol Oxf 47: 337-342.
11.) Gooren LJ, Giltay EJ, Bunck MC (2008) Ogologo oge ọgwụgwọ transsexuals na cross-mmekọahụ homonụ: ọtụtụ ahụmahụ onwe onye. J Ọgwụ Endocrinol Metab 93: 19-25.
12.) Smith YL, van Goozen SH, Cohen-Kettenis PT (2001) Ndị nọ n'afọ iri na ụma na-enwe nsogbu njirimara nwoke na nwanyị bụ ndị a nabatara ma ọ bụ jụ maka ịwa ahụ maka mmekọahụ: ọmụmụ ihe na-esote. J Am Acad Adomụaka 40, 472: 481-XNUMX.
13.) Smith YL, Van Goozen SH, Kuiper AJ, Cohen-Kettenis PT (2005) Ntughari mmekorita nwoke na nwanyi: nsonaazụ na ndị amụma banyere ọgwụgwọ maka ndị na-eto eto na ndị okenye. Ọrịa Med 35: 89-99.
******* EGO HERE ************
14.) Leavitt F, Berger JC, Hoeppner JA, Northrop G (1980) Nhazi ọgwụ nke nwoke na nwoke na nwanyị na-enweghị ọgwụgwọ hormonal. J Nerv Ment Dis 168: 693-697.
View edemede googna Ọkà mmụta
15.) Cohen Kettenis PT, van Goozen SH (1997) Ntughari mmekorita nke ndi na-eto eto: ihe omuma. J Am Acad Childmụaka Na-eto Eto Ọrịa 36: 263-271.
16,) Newfield E, Hart S, Dibble S, Kohler L (2006) qualitydị ndụ transgender nwanyi-to-nwoke. Ndụ Nke Ndụ 15: 1447-1457.
17.) Landén M, Wålinder J, Hambert G, Lundström B (1998) Ihe ndị na-ebu amụma banyere ịkwa ụta na mgbanwe mmekọahụ. Arụ ọgụgụ isi Scandinavica 97: 284-289.
18.) Hepp U, Kraemer B, Schnyder U, Miller N, Delsignore A (2005) Ọrịa na-arịa ọrịa ọrịa na njirimara nwoke na nwanyị. J Psychosom Res 58: 259-261.
19.) Murad MH, Elamin MB, Garcia MZ, Mullan RJ, Murad A, et al. (2010) Usoro ọgwụgwọ na imeghari nwoke na nwanyị: nyocha nhazi na meta-nyocha nke ndụ na ihe omume psychosocial. Ọgwụ Endocrinol (Oxf) 72: 214-231.
20.) Landén M, Wålinder J, Lundström B (1996) Omume na oke mmekọahụ nke transsexualism na Sweden. Arụ ọgụgụ isi Scandinavica 93: 261-263.
21.) Lobato MI, Koff WJ, Manenti C, da Fonseca Seger D, Salvador J, et al. (2006) Followgbaso ịwa ahụ gbasara mmekọahụ na transsexuals: otu ndị otu Brazil. Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ 35: 711-715.
22.) Bodlund O, Kullgren G (1996) Transsexualism-General pụta na prognostic ihe. A afọ ise afọ ọmụmụ nke 19 transsexuals na usoro nke na-agbanwe mmekọahụ. Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ 25: 303-316.
23.) Lindemalm G, Körlin D, Uddenberg N (1986) Ogologo oge nke "mgbanwe mmekọahụ" na 13 nwoke na nwanyị transsexuals. Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ 15: 187-210.
24.) Rauchfleisch U, Barth D, Battegay R (1998) [Nsonaazụ nke ogologo oge nke ndị ọrịa transsexual]. Nervenarzt 69: 799-805.
25.) Kuhn A, Bodmer C, Stadlmayr W, Kuhn P, Mueller MD, et al. (2009) Ndụ nke ndụ afọ 15 mgbe a nwesịrị ịwa ahụ ọzọ maka transsexualism. Fatịlaịza Steril 92: 1685-1689 e1683.
26.) Zimmermann A, Zimmer R, Kovacs L, Einodshofer S, Herschbach P, et al. (2006) [Transsexuals afọ ojuju ndụ mgbe arụmọrụ mgbanwe nwoke na nwanyị]. Chirurg 77: 432-438.
27.) Rehman J, Lazer S, Benet AE, Schaefer LC, Melman A (1999) Mmekọahụ gbasara ịwa ahụ na ịwa ahụ nke ndị ọrịa 28 na-esote nwoke na nwanyị Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ 28: 71-89.
28.) Hepp U, Klaghofer R, Burkhard-Kubler R, Buddeberg C (2002) [Usoro ọgwụgwọ nke ndị ọrịa transsexual. Ihe omumu nke ndi mmadu]. Nervenarzt 73: 283-288.
29.) Lawrence AA (2003) Ihe ndị metụtara afọ ojuju ma ọ bụ ụta na-esochi ịwa ahụ nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ. Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ 32: 299-315.
30.) Kaube H, Biemer E (1991) [Nsonaazụ nke mgbanwe mgbanwe mmekọahụ na ndị ọrịa 30 transsexual: omume mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mmekorita nwoke na nwanyị. Aka Aka Mikrochir Plast Chir 23: 276-278.
31.) Dolmén L (2001) Brottsligheten na olile länder (Criminality na mba dị iche iche). Stockholm: Brottsförebyggande rådet (ndị Sweden National Council for Crime Prevention).
32.) Fazel S, Grann M (2006) Ọnụọgụ ndị mmadụ nwere nnukwu ọrịa ọgụgụ isi na mpụ ime ihe ike. Am J Isi Ọrịa 163: 1397-1403.
33.) Landén M, Wålinder J, Lundström B (1998) Njirimara nke ihe omumu nke umu nwanyi na umu nwoke ndi nwoke choro maka mmeko nwoke: omumu ihe omuma. Acta Psychiatrica Scandinavica 97: 189-194.
34.) Elamin MB, Garcia MZ, Murad MH, Erwin PJ, Montori VM (2010) Mmetụta nke mmekọahụ steroid na-eji ihe gbasara ọrịa obi na transsexual ndị mmadụ n'otu n'otu: usoro nhazi na meta-nyocha. Ọgwụ Endocrinol (Oxf) 72: 1-10.
35.) Landén M, Innala S (2000) Àgwà banyere transsexualism na nyocha mba Sweden. Akụkọ banyere Mmekọahụ Mmekọahụ 29: 375-388.
36.) Mueller A, Gooren L (2008) etuto-metụtara mbufụt na transsexuals na-anata ọgwụgwọ na homonụ na-enwe mmekọahụ. Eur J Endocrinol 159: 197-202.
37.) Vujovic S, Popovic S, Sbutega-Milosevic G, Djordjevic M, Gooren L (2009) Transsexualism na Serbia: ọmụmụ afọ iri abụọ. J Mmekọahụ Med 6: 1018-1023.
38.) Rehman J, Lazer S, Benet AE, Schaefer LC, Melman A (1999) Mmekọahụ gbasara ịwa ahụ na ịwa ahụ nke ndị ọrịa 28 na-esote nwoke na nwanyị transsexual. Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ 28: 71-89.
39.) bysby U, Brandt L, Correia N, Ekbom A, Sparén P (2001) Ọnwụ na-arị elu na ọrịa bipolar na unipolar na Sweden. Arch Gen Ọrịa 58: 844-850.
40.) Tidemalm D, Langstrom N, Lichtenstein P, Runeson B (2008) Ihe ize ndụ nke igbu onwe ya mgbe ọ gbalịsịrị igbu onwe ya dị ka mmekọrịta ọrịa psychiatric na-adị n'otu: Ọmụmụ ihe otu ndị Sweden na-agbaso ogologo oge. Bmj 337: a2205.View edemede googna Ọkà mmụta
41.) Ndị Toori AW, Thomassen MC, Zweegman S, Magdeleyns EJ, Tans G, et al. (2003) Trombosis Venous na mgbanwe nke mgbanwe mgbanwe hemostatic n'oge oge ịgafe-
ọgwụgwọ homonụ mmekọahụ na transsexual ndị mmadụ. J Clin Endocrinol Metab 88: 5723-5729.